लकडाउनलाई पुनः ब्युँताउने तयारी ! - News25 Daily
June 18, 2020 adminLeaveaComment on लकडाउनलाई पुनः ब्युँताउने तयारी !
काठमाडौँ । सरकारले लकडाउनलाई पुनः ब्युँताउने तयारी गरेको छ। सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार असार मसान्तभित्र लक डाउन पुनः सुचारु गर्ने तयारी भएको हो । असार महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको हुँदा सरकार तथा निजी क्षेत्रले हिसाब मिलन गर्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो । पर्याप्त राजश्व संकलन संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च चलाउन समेत मुस्किल पर्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ वर्षभरि भएका कामको भुक्तानी दिने र त्यसबापतको कमिसन लिने बेला पनि यही समय भएको हुँदा लगाउनलाई खुकुलो बनाइएको हो । तर, संक्रमितको संख्या सात हजार नाघेको अवस्थामा पनि लकडाउन खुकुलो भएको मा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकारलाई राजश्व संकलन गर्न दबाब परिरहेकाले लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो । असार मसान्तसम्म अर्थतन्त्र ले एउटा मार्ग समात्ने भएकोले लकडाउन पुनः सुचारु गर्ने तयारीमा सरकार लागेको सरकारी उच्चस्रोतको भनाइ छ ।
एकजनालाई संक्रमण हुँदा लकडाउन गरेको सरकारले अहिले सात हजार जना संक्रमित हुँदा खुकुलो बनाउन सरकार उल्टो बाटोमा लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । अबको लकडाउन विगतको जस्तै गर्ने कि, अझै कडा गर्ने वा मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको श्रोतको भनाइ छ। न्युज अफ नेपाल
काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलनेयिम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीको पक्षमा अभिब्यक्ति दिएका छन् । विहिवार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्र्दै उनले एमसिसीको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले (एमसीसी) का आलोचकहरुले सम्झौता पढ्दै नपढी टिप्पणी गरेको बताएका छन् ।
एमसीसीको विरोध नेपालको उन्नति र भावि पुस्ताको प्रगति नचाहनेबाट भएको बताएका छन् । एमसिसीको सम्झौता नपढी विरोध गरेको भन्दै उनले पटक पटक त्यो सम्झौता पढ्न आग्रह गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा हल्ला गर्ने र विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने प्रवृत्ती बढेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कि विकास हुन आट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यो यो देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउछ भन्ने कल्पना छाड्न आग्रह गगरेका छन् । उनले पछिल्लो पुस्तालाई विकासको रुप देखाउन लाग्दा अनावश्यक विरोध भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसंग भएको महाकाली सन्धिको पनि प्रतिरक्षा गरेका छन् । शनिवार भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाकाली सन्धी गर्नेहरुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । सो सन्धी नेपालको राष्ट्रियता विपरित भएको भन्दै विरोध गरिएको थियो । जसपाका नेता महन्त ठाकुरले देश बेचुवालाई जनताले चिन्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता ब्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिको बचाउ गर्दै नेपाल कहिं पनि नचुकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘एक जमानामा महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा यति ठूलो बबन्डर, आँधी हुरी मच्चियो । म आश्चर्यचकित भएँ । मैले भनेँ म त त्यस्तो केही देख्दिन, यहाँ ठीकै देख्छु’ उनले भने । उनले सन्धिको पाना पल्टाएर पढ्न र हेर्न चुनौति दिदै नेपाल र भारतको सीमाना पनि त्यो सन्धिमा प्रष्ट उल्लेख भएको बताएका छन् । महाकाली नदीलाई दुई देशको सीमा मानिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कालीको मुहानबारे पनि सन्धिमा प्रष्ट लेखिएको बताएका छन् ।